बिचरा सन्यासीले 'त्रियाचरित्र' बुझ्ने रहर गर्दा.. | Citizen Post News
बिचरा सन्यासीले 'त्रियाचरित्र' बुझ्ने रहर गर्दा..
२०७६ पुस २१ गते १०:३२
एकपटक एक सन्यासीले बर्षौं हिमालयमा बसेर चारै वेदहरुको ज्ञान प्राप्त गरे । उनको प्रतिभादेखि उनको गुरु धेरै खुशी भए । उनले आफ्नो शिष्यलाई भने, 'तिम्रो ज्ञान अब अपार छ र अब तिम्रो कर्त्तव्य बन्छ कि तिमी गाँउगाँउ गएर आफ्नो ज्ञानद्वारा लोकलाई शिक्षा देउ र उनीहरुको उद्धार गर ।' गुरुको आदेशलाई अध्यादेश मानेर सन्यासी महाराजले आफ्नो लक्ष्य गाउँतिर बनाए ।
कैयौं दिनको पदयात्रा पछि उनी एक गाँउमा पुगे । र गाँउको बाहिर उनले आफ्नो एउटा कुटी बनाए । त्यसमा नै उनले एउटा सानो मन्दिर पनि बनाए । उनले दिनदिनै रामायण पाठ त कहिले भागवत गीताको पाठ गर्न लागे । बिस्तारै-बिस्तारै गाँउका मान्छेको नज़र उनीमाथि पर्न थाल्यो । बिस्तारै मानिसहरु पनि आउन शुरू गरे ।
समयको साथ गुरुजीको लोकप्रियता बढ़न थाल्यो । जब उनीप्रति लोकको श्रृद्धा बढ्यो तब त्यसको साथ गाँउवालाको सेवा, भाव पनि बढ्यो । अब त दिनका दिन उनको लागि कहिले यस घरबाट त कहिले त्यो घरबाट खाना आउंथ्यो । लोक उनको प्रवचन सुन्नका लागि आतुर रहन्थे । बिस्तारै उनको मन्दिरमा दान पनि राम्रो आउन लाग्यो । अब त उनको सेवक पनि भए । गाँउका छोरी बुहारीहरू उनको नजिक निसंकोच आएर बस्थे र उनीहरुले नै उनको कुटीको सरसफाई पनि गरीदिन्थे ।
गाँउमा उनको समय धेरै नै शान्ति र इज्ज़तसँग बित्दै गइरहेको थियो । तर कहिलेकाहीँ उनको मनलाई एउटा ख्याल सताई रहन्थ्यो । त्यो यो थियो कि जब उनले आफ्नो शिक्षा पुरा गरेर आफ्नो ज्ञानको प्रचार गर्न तथा लोकलाई धर्म र कर्मको ज्ञान दिन जाँदै थिए, उनको गुरुजीले उनलाई भनेका थिए,' बाबु, जिन्दगीमा एउटा कुराको हमेशा ध्यान राख्नु । कहिल्यै पनि 'त्रियाचरित्र' को चक्करमा नपर्नु । किनकी यदि त्यहाँ फस्यौं भने निस्कन मुश्किल हुन्छ । तिम्रो काम लोकलाई ज्ञान र धर्मको मार्ग देखाउनु हो । कहिले पनि आफ्नो उद्देश्यमा नभट्किनु ।'
शिष्यले यो कुरामा उनीसंग सोधे,'गुरुजी, हजुरले मलाई केहि त त्रियाचरित्रको ज्ञान दिनुस् । यस बारेमा मैंले पनि त केहि बुझुँ ।'
त्यहीबेला गुरुजीले भने,'जुन चीज़लाई देव र देवताले जान्न पाएनन्, त्यो तिमी कसरी जान्न सक्छौं ? बस मेरो शिक्षा यो हो कि हमेशा त्रियाचरित्रबाट बचेर रहनु ।'
तर जबदेखि गुरुजी यो गाँउमा आए, उनले पाए कि गाँउका कन्याहरू धेरै नै सीधा सरल तथा सेवा भावबाट भरपुर छन् । उनले कुनै वस्तुको चाहना गर्छन्, पहिले नै उनीहरुले उनको मनको बात बुझ्दथे र उनको हर इच्छा भन्नु भन्दा पहिला नै पुरा हुन्थ्यो । उनले मनमनै सोच्थे कि साराका सारा गाँउका महिला र चेलीबेटी कति सभ्य छन् । थाहा छैन्, गुरुजीले किन उनलाई यिनीहरुबाट बच्न भने र उनी यहि सवाललाई लिएर धेरै चिन्तित थिए ।
एक दिन उनले मनमा ठाने कि उनले यसको पत्ता लगाएर छोड्छु कि किन गुरुजीले उनलाई यो 'त्रियाचरित्र' बाट बच्न भनेका थिए । धेरै सोचविचार गरेर उनको नज़र आफ्नो एक भक्त कन्याप्रति पर्यो । जो धेरै नै सेवा भावले नित्य उनको लागि भोजन लिएर आउँथिन् । उनले मनमनै उसँग आफ्नो यो उत्सुकताको समाधान प्राप्त गर्ने निश्चय गरे ।
हिम्मत गरेर एक दिन उसलाई सोधे,'नानी, म धेरै दिनदेखि एक समस्यामा अल्झिएको छु । के तिमीले मेरो मद्दत गर्न सक्यौं ?'
युवती तुरुन्त नै हात जोडेर खडा हुदैं भनिन,'गुरूजी म हजुरको हर समस्याको हल खोज्नमा हजुरको मद्दत गर्ने पुरै कोशिश गर्छु, हजुर बताउनु होस ।'
गुरूजीले भने,'म जान्न चाहन्छु कि त्रियाचरित्र भनेको के हो ? यस्तो के खास कुरा छ जो हमेशा लोकले भन्छन् कि यसलाई बुझ्न धेरै नै मुश्किल हुन्छ । नानी, के तिमी मलाई यसको ज्ञान दिन सक्छौं ?'
बिचरी नानी चुप भइन् र आफ्नो टाउको फर्काएर गइन् । तर अब भने जहिले पनि उनी खाना लिएर आउँथिन् । गुरुजीले हमेशा यहि सवाल गर्थे । र यसरी कैयौं दिन बित्यो । तर गुरुजीको उत्सुकता कम भएन । एक दिन साँझको बेला गुरुजी आफ्नो प्रवचन गरिसकेका थिए । मान्छेहरु गुरुजीको कुटीको बाहिर थिए । ति युवती सधैं झैं गुरुजीको खाना लिएर आइन् ।
गुरुजी आफ्नो आसनमा आराम गर्दै थिए । जसरी उनले युवतीलाई देखे र भने,'नानी, आज त बताउ कि त्रियाचरित्र कस्तो हुन्छ ?'
अचानक ति युवतीले यताउता नहेरिकन उनले खाना जोडले जमिनमा फ्याँकेर ज़ोड ज़ोडले चिच्याउन लागिन् । त्यहिबेला मान्छेहरु उनी चिच्याएको आवाज़ सुनेर तुरुन्त दौड्दै भित्र आए । जब सवैजना भित्र आए, युवतीले रुदैं गुरुजीतिर इशारा गरिन् । बस, फेरी के थियो ? त्यो दृश्य यस्तो थियो कि जुन गुरुजीले जिन्दगीमा कहिल्यै पनि सोचेका थिएनन् ।
जुन हातले गुरुजीको पाउ छुन थाक्दैन् थिए, त्यो आज गुरुजी माथि तड़ातड़ बर्षिरहेको थियो । जुन हातहरुले गुरुजीको कुटीको सफाई गर्दथे, ति आज त्यसलाई उजाड्नमा लागेका थिए । फेरी केहि बेरमा कुटी उजाड भयो । गुरुजीले कैयौं पटक सुनेका थिए कि मान्छेले दिनमा तारा देख्छ तर त्यस दिन उनको आँखा अगाडी तारा नाचिरहेको थियो ।
त्यहिबेला अचानक युवती जोडले चिच्याइन्,'रोक्नुस्, यो तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ ?'
भीड़ रोकियो र अचम्मसँग युवतीलाई हेर्न लागे । युवतीले भनिन्,'तपाइहरुले किन पिट्दै हुनुहुन्छ ?'
भीड़ मध्येको एक सज्जन बोले,'तिमीले नै त ईशारा गुरुजीतिर गरेकी थियौं र तिमी रोइरहेकी थियौं । हेर छोरी, तिमी नडराउ यस्ता ढोंगी त हामीले धेरै देखेका छौं । हामीले यसलाई अहिले नै साराका सारा ज्ञान धोइ दिन्छौं ।'
उता बिचरा गुरुजी अहिलेसम्म नीलो, पहेँलो, हरियो र गुलाबी साराका सारा रंग देखिसकेका थिए । डराउँदै थर-थर कामिरहेका थिए । मनमनै सोचिरहेका थिए कि आज त उनको राम नाम सत्य भयो ।
त्यहिबेला युवतीले भनिन्,'तपाइहरुले यी गुरुजीलाई किन पिट्दै हुहुन्छ ? म त यसकारण चिच्याएकी थिएँ कि मैंले गुरुजीको आसनको पास एउटा ठुलो कालो नाग देखेर म डराएँ । तपाईहरु भित्र आउँदा मैंले हजुरहरुलाई इशाराद्वारा बात बताउन चाहे । तर हजुरहरुले मेरो कुरामा ध्यान नदिई गुरुजीलाई पिट्न शुरू गर्नु भयो ।'
यो सुनेर सबैको टाउको शरमले झुक्यो । र फेरी त्यहि हात तुरुन्त गुरुजीको पाउँमा परे । बिचरा गुरुजी यो बिहान र साझलाई बुझ्नै पाएनन् । केहिबेरमा उनको कुटी जसले उजाडेका थिए, फेरी जस्ताकोत्यस्तै बनाइदिए । र, गुरुजीसंग माफ़ी मागेर आआफ्नो घर गए । गुरुजीले अहिलेसम्म बुझ्न सकिरहेका थिएनन् कि के भएको थियो ।
यत्तिकैमा उही कन्या फेरी कुटीमा प्रवेश गरिन् । यस पटक उसको हातमा हल्दी वाला दूध थियो । उसलाई देखेर बिचार गुरूजीको होश उडेको थियो । युवतीले गुरुजीको पास दूध राखिन र भनिन,'महाराज, मलाई माफ़ गर्नुहोला तर हजुरले बारम्बार जिद्दी गर्नु भयो कि त्रियाचरित्रको बारेमा बताउनको लागि । मैंले हजुरलाई यसको एक रूप देखाई दिएँ किनकी यसलाई बुझ्न सकिन्न ।'
उता गुरूजी थरथर काम्दै थिएँ । यस घटनाले उनको साराका सारा भ्रम जो उनको आफ्नो बारेमा थियो, टुट्यो । युवतीले दुध राखेर गइन् । बिचरा गुरुजी रातभरी सुत्न सकेनन् । उनलाई लागिरहेको थियो कि उनको साराका सारा ज्ञान अधूरो छ र उनलाई सारा वेद फेरीबाट पढ्नुपर्छ र यहि सोचेर उनी आधा रातमा आफ्नो सामान बाँधेर फेरी हिमालयतिर गए । फोटोः सांकेतिक गुगल फाइल #गणेशजी